We She Me: ဆိုင်ဂုံသို့ တစ်ခေါက်
ှ ဒီတစ်ခေါက် ကုမ္ပဏီက Incentive Trip အနေနဲ့ Vietnam နိုင်ငံ Ho Chi Min City ကို သွားကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ကုန်ခါနီးတုန်းကလည်း ကိုရီးယားသွားပေမယ့် ညားခါစ ဇနီးလေးကို စင်္ကာပူ ခေါ်လာပြီးမှ တစ်ယောက်တည်း မထားခဲ့ရက်တာနဲ့ မလိုက်ဖြစ်လို့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကလေးရှိပေမယ့် လိုက်သွားဖို့ သူမကိုယ်တိုင်က တိုက်တွန်းတာနဲ့ လိုက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ.. Pleasure နဲ့မသွားရင်လည်း Business နဲ့ သွားရသေးတာပဲ။ တကယ်တော့ Team Building Trip ပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက၀ိုင်း Vote ပြီး Director ကို (အချိန်မလောက်ဘူးတို့၊ ပင်ပန်းနေကြပြီတို့) လှမ်းပြောလိုက်တော့ Director က Team Building Exercise တို့ Presentation တို့ကို မလုပ်လည်းရတယ်လို့ ခွင့်ပြုလိုက်တော့ Trip ကြီးပဲ သီးသန့်ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အထုပ်လည်းသေး၊ ပြန်ပြီးတော့လည်း Claim လုပ်လို့မရတာနဲ့ လေဆိပ်ကို အသွားမှာ MRT (ရထား) နဲ့ပဲ သွားတယ်။ စင်္ကာပူ ရောက်စကတော့ MRT က လေဆိပ်ထိ ရောက်တာကို တော်တော် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ထင်မိတယ်။ Paris တို့ Hong Kong တို့၊ KL တို့မှာပါ ရထားက လေဆိပ်ထိ ရောက်တာကို သိရတော့ ဒါ (ရထား လေဆိပ်ထိ ရောက်တာ) ဟာ International လေဆိပ်တစ်ခု ရဲ့ အင်္ဂါရပ် တစ်ခုပါလားလို့ပဲ ထင်တော့တယ်။ လေဆိပ်မှာလည်း အစတုန်းက စစ်ဝတ်စုံ အပြည့်နဲ့ စစ်သားတွေ တွေ့ရင် မလုံမခြုံ ခံစားရပေမယ့် အခုတော့လည်း ပိုပြီးတောင် လုံခြုံသလို ခံစားရပါတယ်။ လူတွေ (အဲ... ကျွန်တော်) ရဲ့ Perception ဟာ အချိန်ကြာတာနဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲတတ်ပါလားလို့ တွေးမိတယ်။
Ho Chi Minh နဲ့ Singapore က သိပ်မဝေးပါဘူး။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်တစ်ကားတောင် ပြီးအောင်မကြည့်ရပါဘူး။ ၁ နာရီခွဲလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ Ho Chi Minh လေဆိပ်က အပျံစား မဟုတ်ပေမယ့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိလှပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်း တော်တော်များများက လေယာဉ်တွေ ဆိုက်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Europe ကဆိုက်တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းကတော့ Air France ပေါ့၊ Saigon က France လက်အောက်မှာ နေဖူးတော့ အခုထိလည်း အဆက်အဆံ ရှိနေပါသေးတယ်။Immigration ကလည်း Counter တွေတော်တော် များပြီး လမ်းညွှန်တွေက အဆင်ပြေပါတယ်။ Immigration Officer တွေရဲ့ Uniform ကတော့ ရဲဝတ်စုံလိုလိုပါ။ ပုခုံးပေါ်မှာလည်း အနီရောင်ဘားတွေနဲ့ ကြယ်တွေနဲ့ ဆိုတော့ မြင်တာနဲ့ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ မေးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဦးထုပ်(အမာစား)တွေကို Counter တွေပေါ်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် တင်ထားတော့ ဘာရယ် ညာရယ် မဟုတ်ဘူး လူရှိန်တာပေါ့။ ကြည့်လို့လည်း ကောင်းပါတယ်။
လေဆိပ် အဆောက်အဦးထဲ က ထွက်လိုက်တာနဲ့ လူတွေ၊ လူတွေ ဆိုတာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ သိပ်မကောင်းသေးတဲ့ လေဆိပ်ဆိုရင် ဒီလိုပဲ။ လာကြိုတဲ့သူတွေနဲ့ ကားတွေအတွက် ထည့်မစဉ်းစားထားဘူး။ လမ်းမပေါ် ရောက်တော့လည်း ဆိုင်ကယ်တွေဆိုတာ တစ်လမ်းလုံး အပြည့်ပဲ။ ကြိုမျှော်လင့်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ထင်ထားတာထက် ပိုများပါတယ်။ ဘာနဲ့တူလည်းဆိုတော့ အရေးအခင်းတုန်းက လမ်းမပေါ်မှာ လူတွေနဲ့ ပြည့်နေသလိုပါပဲ။ ဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်းပဲ မောင်းနိုင်ကြပါတယ်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ မရွေး ဆိုက်ကယ်မောင်းကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှ Helmet မဆောင်းကြပါဘူး။ Tour Guide က ရှင်းပြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်တုန်းက လူတိုင်း Helmet ဆောင်းကြဖို့ အမိန့်ထုတ်ဖူးပါတယ်။ အမိန့်ထုတ်ပြီးတော့မှ ယာဉ်တိုက်မှုနှုန်းက ပိုများလာပါတယ်။ သဘာဝကျပါတယ်။ Helmet ဆောင်းထားတော့ မြင်ကွင်းကလည်း အပြည့်မမြင်ရ၊ အသံလည်း ကောင်းကောင်းမကြားရပါဘူး။Helmet မဆောင်းထားရင် မျက်စိ တစ်ချက်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘေးဘီကို ကောင်းကောင်းလည်း မြင်ရပါတယ်။မြို့တွင်းလမ်းတွေမှာ စက်ဘီး မောင်းတာထက် မပိုချင်တဲ့ နှုန်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းပဲ မောင်းလို့ရတာ ဆိုတော့ လဲကျလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်သူမှ Helmet မဆောင်းကြတော့ပါဘူး။ နေပူရင်တော့ ရိုးရိုး ဦးထုပ် ဆောင်းကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ လက်ရှည်တွေ၊ Mask တွေ ၀တ်ထားကြပါတယ်။ ကလေးတွေကလည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖက်မွေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အရှေ့မှာ ကောင်းကောင်း ထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို အိပ်တောင် အိပ်နေပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေက များလွန်းတော့ အရမ်း Pollute ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမပေါ်ရောက်ရင် အသက်ကောင်းကောင်းရှူလို့ မရပါဘူး။ လမ်းဘေးမှာ တစ်နေကုန် နေရတဲ့ ဆိုင်ထိုင်တဲ့ သူတွေပါ Mask တွေ ၀တ်ထားရပါတယ်။ လမ်းကူးရတာလည်း မလွယ်ပါဘူး။ Guide ပြောသလိုပဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး တည့်တည့်သာကူးသွား ဆိုင်ကယ်တွေက ရပ်ရင်ရပ် မရပ်ရင် ရှောင်သွားကြပါတယ်။ မျက်စိတော့ မမှိတ်ပါဘူး၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြည်းဖြည်း ကူးသွားရင် ရပါတယ်။ မင်းတို့ မြန်မာပြည်မှာရော ဆိုင်ကယ်တွေ ဒီလိုပဲလားလို့မေးတာကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် မရှိဘူး ပြောပြတော့ အရမ်း အံ့သြကြပါတယ်။
ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ညကျတော့ ဆိုင်ဂုံမြစ်ထဲက ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ညစာစားကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် သခင်မြ ပန်းခြံလိုမျိုးနေရာမှာ ကပ်ထားပါတယ်။ Strand Hotel နားမှာမျိုးဆို ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ Downtown နဲ့လည်းနီးတယ်၊ အနားမှာလည်း5stars hotel တစ်ခု(Renaissance Riverside Hotel) ရှိတယ်။ ဒီလိုပါပဲ သင်္ဘောပေါ်က စားသောက်ဆိုင်ပါ။ အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး။ စားနေတုန်း မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် စုန်ဆန်ကူးပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ အဆို၊ အကနဲ့ ဖျော်ဖြေပါတယ်။ သဘောင်္နှစ်စင်းတွေ့တာ နှစ်စင်းလုံး လူအပြည့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သင်္ဘောပေါ်မှာ ဂျပန်တွေရော ကိုရီးယားတွေရော ပါပါတယ်။ ကိုရီးယား ဘုန်ကြီးတွေက ညစာစား(ဘုန်းပေး)တယ်ဗျာ။ ဒီလောက်တောင် ပိုက်ဆံ သုံးနိုင်တဲ့ သူတွေ လာတာတွေ့တော့ အံ့သြတယ်။ ငမွဲတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သွားစရာ ကုန်သွားလို့ဖြစ်ရမယ်လို့တွေးနေသေးတယ်။ နောက်မှ သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်တော့ ဟုတ်တာပဲ။ Barcelona မှာ ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်တဲ့သူတွေ၊ Paris သွားပြီး Eiffel Tower နဲ့ ဓါတ်ပုံ သွားရိုက်တဲ့ သူတွေက အသက်ငယ်ငယ် စုံတွဲတွေပဲ။ အခုဟာက အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေပဲ။ တတ်နိုင်သလောက်ကို နီးနီးနားနား သွားကြတာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မိဘတွေကိုလည်း ဒါမျိုးလေး လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ် တွေးမိသေး။ အဘွားကိုလည်း သွားသတိရသေးတယ်။ အိုး..သူတို့က ပုဂံက ဘုရားလောက်ဖူးရရင် ပျော်နေမယ် ထင်ထားရင်တော့ မှားသွားမယ်။ အသက် ၇၅ နှစ်ကျော်နေတဲ့ ကျွန်တော့် အဘွားကလည်း စင်္ကာပူ လာလည်းချင်သေးတယ်။ ဒါတောင် မလေးရှားနဲ့ ဘန်ကောက် ရောက်ဖူးပြီးသား။ သူ့ သား၊သမီးတွေ ခေါ်သွားတာ။ထားပါတော့။နောက်ပြီး ဘာမှာ မဟုတ်တာကို Tour Program တစ်ခု လုပ်ထားတာကိုလည်း တွေးမိသေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း ဒါမျိုးလုပ်ပါသေးတယ်။ မအောင်မြင်လိုက်ပါဘူး။
ဟိုတယ်က Amara Hotel (Saigon) ပါ။4Stars ပါ။ Downtown နဲ့ နည်းနည်းလှမ်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ စံပြလိုမျိုးမှာပေါ့။ စင်္ကာပူက အခွဲဆိုတော့ Singapore Style နဲ့ Singaporean တွေ အကြိုက်ပါပဲ။ Singaporean တွေလည်း တော်တော် လာတည်းကြပါတယ်။ Breakfast က ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဟိုတယ်တွေရဲ့ အဆင့်အတန်းကို Breakfast နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အိပ်ခန်းကတော့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု သိပ်မကွာကြပါဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး Bath tub မပါတဲ့ အိပ်ခန်းပဲ ရှိပါမယ်။ ဒါလည်း ကိုယ့်အတွက် အရေးမကြီးပါဘူး။ Bath tub ထဲမှာ ရေစိမ်နေလောက်အောင် စိတ်မရှည်ပါဘူး။ အလွန် စုတ်ချာတဲ့ ဟိုတယ်ဆိုရင်တော့ အခန်းထဲမှာ အနံ့ တစ်မျိုးရှိမယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ Breakfast ကတော့ နည်းနည်းဆို နည်းနည်း သိသာပါတယ်။ များများ ခွက်(ကပ်စေနည်း)လား၊ နည်းနည်းခွက်လားက Breakfast မှာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ Amara Hotel က Breakfast ကောင်းပါတယ်။
Breakfast စားပြီးတော့ Ben Thanh Market ကို သွားပါတယ်။ Ben Thanh ဈေးက ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးလို့ပေါ့။ Tourist တွေလာတဲ့ နေရာ။ ဥပစာ (Façade) ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက ပိုသာပါတယ်။ အတွင်းကျတော့လည်း သူက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးနဲ့ လှည်းတန်းဈေး ပေါင်းထားသလိုပဲ။ အရှေ့ဖက်တန်းတွေမှာတော့ Tourist တွေ ၀ယ်ဖို့တွေ ရှိပြီး၊ အနောက်ဖက်ကို ၀င်သွားတာနဲ့ အသုပ်ဆိုင်တွေရော၊ ချဉ်ဖက်ဆိုင်တွေရော ရောက်သွားပါတယ်။ အနောက်ဆုံးမှာတော့ ကုန်စိမ်းတန်းလိုပါပဲ။ တစ်ခု ထူးခြားတာက အပြင်ဖက် ပတ်လမ်း တစ်လျှောက်လုံးက အစိုးရဆိုင်တွေပါ။ ၀င်းသူဇာ လိုမျိုးပေါ့။ ဆိုင်ထိုင်တွေက Uniform ၀တ်ပါတယ်။ Fixed Price ပါ။ အတွင်းဖက်က ဆိုင်တွေမှာတော့ Bargain လုပ်နိုင်မှပါ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ပုဂ္ဂလိက (Private) ဆိုင်တွေက ပစ္စည်းတွေက အရောင်အသွေး ပိုစုံပါတယ်။ Souvenir တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ စကားအပိုပြောစရာ မလိုတဲ့ အပြင်တန်းကပဲ ၀ယ်လာတယ်။ Polo Sport Shirt အတုတွေလည်း ၀ယ်လာသေးတယ်။ Vietnam Dong ၅ သောင်းခွဲပါ။ ၅ S$ ကျော်ကျော်ပေါ့။ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၄-၅ ထောင်လောက်ပေါ့။ Singaporean တစ်ချို့ကတော့ Fake မ၀တ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လုပ်နေသေးတယ်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကို ၀ယ်တာပဲ၊ ဘာဖြစ်လဲ။ စင်္ကာပူက ဈေးအပေါဆုံး Hang Ten ထက်တော့ အများကြီး ကောင်းပါသေးတယ်။
ဆိုင်ဂုံမှာ ဒဂုံ(ရန်ကုန်ကို ပြောတာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်ကို ပြောတာမဟုတ်)နဲ့ တူတာ တော်တော်များပါတယ်။ တိုက် အဟောင်းတွေက နည်းနည်းဆင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ မျက်နာစာခွင် နည်းနည်း ကျဉ်းပါတယ်။ ၁၅ပေ၊ ပေ၂၀ ပဲ ရှိမှာပါ။ ရန်ကုန်မှာတော့ ၂၅ ပေ ရှိကြပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံထဲက ရွှေဆိုင်တွေဆို လသာက ရွှေဆိုင်တွေနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ မိတ္တူကူးဆိုင်တွေလည်း တော်တော်ရှိပါတယ်။ လဘက်ရည်ဆိုင်လိုမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ Cafe လို့ခေါ်တာပေါ့၊ ပြင်သစ်တွေလို။ အဆင်အတန်းကလည်း မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ လမ်းဘေး အိမ်ဆိုင်လေးကနေ Bar လိုလို Cafe တွေအထိပါ။ ဗီယက်နမ်လူမျိုး (လူငယ်)တွေက နေ့ခင်းဖက်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ညဖက်ကျရင်တော့ Cafe သွားကြပါတယ်။ လမ်းဘေးက Cafe တွေက မြန်မာပြည်ကနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ မတူတာတစ်ခုက သူတို့ထိုင်တဲ့ ခုံတွေက Plastic နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပက်လက် ကုလားထိုင်လိုမျိုးပါပဲ။ ဗျက်ကျယ်ကျယ်၊ နည်းနည်း ပက်ပက်ပါ။ ခုံတွေ အကုန်လုံးကလည်း လမ်းမဘက် လှည့်ထားပါတယ်။ အင်း.. ကော်ဖီသောက်ရုံ သက်သက်လာတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နေ့လည်စာ စားပြီးတော့ Cu Chi Tunnel ကို သွားကြပါတယ်။ Cu Chi Tunnel ဆိုတာ နာမည်ကျော်ပါပဲ။ အမေရိကန်တပ်တွကို ပြောက်ကျားနည်းနဲ့ မြေအောက်မှာ တွင်းတွေ တူးပြီးတိုက်တဲ့နေရာပါ။ ဆိုင်ဂုံသွားရင် မလည်မဖြစ်သွားရမယ့် နေရာပါ။ မြို့ထဲကနေ ၁ နာရီလောက် ကားနဲ့ သွားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်သွားတော့ Bus ကားတွေက ၅ စင်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့က ၂ စင်းဆိုတော့ တော်တော် လူစည်သွားပါတယ်။ အမြဲတမ်းပဲ အဲဒီလိုများလား မသိဘူး။ ရောက်တာနဲ့ အခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာ လူစုပြီး Tour Guide က မြေပုံတွေ၊ ပုံစံငယ်လေးနဲ့ ရှင်းပြပါတယ်။ တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ Documentary တစ်ခွေပြပါတယ်။ ပြီးမှ တကယ့် စစ်စခန်းတွေ နေရာကို သွားကြပါတယ်။ Tunnel တွေရှိတဲ့ နေရာက အခုတော့ လူသွားတာ များလို့ တော အနက်ကြီး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူ သွားလို့ရသွားပါပြီ။ မြေအောက် လှိုဏ်ခေါင်းလေးတွေ ၀င်ပေါက်တွေက အင်မတန် သေးပါတယ်။ လူသေးသေး တစ်ကိုယ်စာ ၀င်လို့ရယုံပါပဲ။ လေ၀င်ပေါက်တွေက ဟိုးအတွင်းကနေ ၀ါးလုံးတွေနဲ့ သွယ်ထားတာပါ။ အပေါ်မှာ မြေကြီးတွေက ခြတောင်ပို့လိုမျိုး လုပ်ထားပါတယ်။ ကတုတ်ကျင်းတွေနဲ့လည်း ဆက်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အနားမှာလည်း ထောင်ချောက်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ထောက်ချောက်တွေက လူကိုချက်ချင်း သေစေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရော၊ ဆူးတွေစူးပြီး ပြန်ထုတ်ရ ခက်တဲ့ ဟာမျိုးတွေရောပါ။ ချက်ချင်း မသေဘဲ ဒဏ်ရရတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားတွေကို နောက်တန်းပြန်ခေါ်သွားတော့ နောက်တန်းက စစ်သားတွေလည်းကို ခြောက်လန့်နိုင်စေပါတယ်။ စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေးပေါ့။ ပြီးတော့ ဆက်လျှောက်သွားကြတော့ သေနတ်ပစ်ကွင်း ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ AK47 ပစ်မလား၊ M16 ပစ်မလား ပစ်လို့ရပါတယ်။ ကျည်တစ်တောင့်ကို ၁.၅ ဒေါ်လာလောက်ပေးရပါတယ်။ တစ်ခါပစ် ၁၀ တောင့်ပါ။ တစ်ချို့တွေ ပစ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့တော့ မပစ်ကြပါဘူး။ ခဏနားပြီးတော့ ဆက်သွားတော့ တကယ်ဝင်လို့ ရတဲ့ မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းကို ရောက်သွားပါတယ်။ Tourist တွေ အတွက် ချဲ့ပေးထားတဲ့ နည်းနည်းလည်း တိုတဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းပါ။ ကျွန်တော်လည်း ၀င်ကြည့်ပါတယ်။ Castrophobic ဖြစ်တဲ့ သူတွေတော့ လိုက်မ၀င်ကြပါဘူး။ချဲ့ပေးထားတယ် ဆိုတာတောင် တော်တော် ကျဉ်းပါတယ်။ လေးဘက်ထောက် သွားရတာပေါ့။ တကယ်ဟာဆို မိကျောင်းသွား သွားရတာဆိုပဲ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ချောက်ချားစရာ ကောင်းပါတယ်။ မှောင်မှောင် ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဘာမှလည်း မမြင်ရ၊ ဘယ်တော့များ အပြင် ပြန်ရောက်ပါ့မလဲ လို့ပဲတွေးပြီး သွားရပါတယ်။ ရှေ့ကလူကို ဖုန်းက အလင်းရောင်နဲ့ပဲ မြင်ရပါတယ်။ အမလေး ပြန်ထွက်လာတော့မှပဲ အသက်၀၀ ရှူလို့ ရပါတော့တယ်။ အထဲမှာလည်း အသက်တော့ ရှူလို့ရပါတယ်။ မြေကြီး နံရံတွေကလည်း မာပါတယ်။ ခြောက်သွေ့ပါတယ်။ တကယ့် အတွေ့အကြုံ တစ်ခုပါပဲ။ တစ်နေကုန် တောထဲ လျှောက်သွားတာရယ်၊ လှိုဏ်ခေါင်းထဲ ၀င်လိုက်တာရယ်ကြောင့် လူလည်းပဲ တော်တော် စုတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ ပလောပီနံဥပြုတ်နဲ့ ရေနွေးကြမ်း ကျွေးပါတယ်။ ဗီယက်ကောင်းတွေ စားတဲ့ အတိုင်းတဲ့။ မီးဖိုကလည်း မြေကြီးထဲမှာပါပဲ။ မီးခိုးကို ရေပိုက်သွယ်သလို သွယ်ပြီး အဝေးမှာ ထုတ်ပါတယ်။ ဒါမှ လေကြောင်းကကြည့်ပြီး ဗုံးကျဲရင် နေရာ လွဲအောင်ပါ။ ဗုံးတစ်လုံး တစ်လုံးကလည်း ကျဲလိုက်ရင် အကျယ် အ၀န်းက ပေ ၁၅၀ လောက်ရှိပြီး အနက်က ပေ၂၀-၃၀ လောက် ရှိတာဆိုတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဆေးရုံကလည်း မြေအောက်မှာပါပဲ။ တစ်ခုမှာ ကုတင် ၁ လုံး၊ ၂ လုံးလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဗုံးကျဲလို့ သေလည်း ၁ ယောက်၊ ၂ ယောက်ပဲတဲ့။ အဲဒီမှာပဲ ညနေခင်းသွားပါတယ်။
အပြန်ကျတော့ ဗီယက်နမ် ညစာနဲ့ ကျွေးပါတယ်။ ဟင်းတော်တော် များများကတော့ တရုတ်ဟင်းလိုလိုပါ။ ယိုးဒယား ကြာဆံသုပ်လိုလည်း ပါပါတယ်။ ဟင်းတစ်ခွက်ကတော့ အရင်က မစားဖူးပါဘူး။ ငါးရံ့ အကွင်းလိုက်ကို နာနတ်သီးနဲ့ ပြုတ်ထားတာပါ။ နည်းနည်း ချိုချို ချဉ်ချဉ်လေးပေါ့။ ကန်စွန်းရွက်လည်းပါတယ်။ တခြား အရွက်တွေလည်းပါတယ်။ တရုတ်တွေကတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ သေချာပြီ ဗီယက်နမ်ဟင်း စစ်စစ် ဖြစ်ရမယ်။ ငါးရံ့ကလည်း အနေတော်လေး၊ လတ်လည်းလတ်တော့ မွှေးနေတာပဲ။ ကိုယ်က ငါးရံ့နဲ့ ဒန့်သလွန်ချက်ရင် အရမ်းကြိုက်တော့ ငါးရံ့အလွမ်းပြေ စားခဲ့ရပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာလည်း ငါးရံ့လိုမျိုး ရှိပါတယ်။ သူကတော့ အကောင်ကြီးပါတယ်။ မမွှေးပါဘူး။ Toman Fillet ပါ။ နောက် ဟင်းတစ်ခွက်က ငါးရှဉ့်ကို မြေအိုးထဲမှာ ပဲငါးပြာရည်နဲ့ ပေါင်းထားတာပါ။ ဒါလည်း စားလို့ကောင်းပါတယ်။ ဆိုင်ဂုံက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ချောင်းတွေ မြောင်းတွေ ပေါတော့ ငါး၊ပုဇွန်တွေ လတ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ဖက်နဲ့ ရာသီဥတုက တူတော့ သစ်သီးဝလံတွေလည်း ပေါပါတယ်။ ရာဘာပင်တွေတောင် တွေခဲ့သေးတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်း ပေါပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝ အားဖြင့် စည်ပင်ဝပြောတဲ့ နေရာပါ။
နောက်တနေ့ မနက်ကျတော့ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းကို သွားပါတယ်။ မဲခေါင်မြစ်က ငယ်ငယ်လေးတည်းက ကြားဖူးပြီး ဘာရယ်မဟုတ် ရောက်ဖူးချင်နေတာ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သွားချင်တာ နိုင်းမြစ်တော့ ကျန်သေးတယ်။ NGO တွေဘာတွေ လုပ်ရင်တော့ ရောက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းက ဆိုင်ဂုံကနေ တော်တော်ဝေးပါတယ်။ ၂နာရီခွဲလောက် ကားစီးရပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ ညောင်တုန်းသွားသလိုပေါ့။ ညောင်တုန်းကလည်း ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါးမှာလေ။ မဲခေါင်မြစ်ကတော့ မြစ်ပီပီသသ ကျယ်ပါတယ်။ မြစ်ဝဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပါတယ်။ ချောင်းသာသာ မြောင်းသာသာလောက်ကို Singapore River ပြောနေရတဲ့ Singaporean တွေအတွက်သာမက ဧရာဝတီမြင်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်တောင် တော်တော် ပျော်သွားပါတယ်။ သင်္ဘော(စက်တပ်လှေ) လေးတွေနဲ့ ကျွန်းတွေကို သွားကြပါတယ်။ တန့်ကြည့်တောင် သွားတုန်းက လှေစီးတာတို့၊ ဟင်္သာတသွားတုန်းက သင်္ဘောစီးတာတို့ ကိုတောင် ပြန်သတိရတယ်။ ဧရာဝတီ အလယ်ပိုင်းကတော့ သောင်ထွန်းတာနဲ့ တော်တော်ကျဉ်းသွားပါပြီ။ အခုဟာကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကျယ်ပါတယ်။ မြစ်ထဲမှာ သဲတူးတဲ့သူတွေ၊ ပုဇွန်ထောင်တဲ့သူတွေ၊ ငါးဖမ်းတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ မြစ်တစ်စင်းဟာ ပါးစပ်ပေါင်း များစွာကို ကျွေးထားနိုင်တာပဲ။ တန်ဖိုးထားတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မြစ်တစ်စင်းဟာ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာပါပဲ။ နားမလည်လို့ပဲ ဖျက်ဖျက်၊ သိရက်နဲ့ပဲ ဖျက်ဖျက် မြစ်ကို တိမ်ကောအောင်၊ ကျဉ်းအောင်လုပ်တာဟာ (သူ့ကိုမှီခိုနေတဲ့)လူတွေကို ငတ်အောင်လုပ်သလိုပါပဲ။ ထားပါတော့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းကို ခေါ်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အုန်းသီးနဲ့ သကြားလုံးလုပ်တာ ရှိပါတယ်။ အုန်းသားနဲ့ လုပ်တဲ့ ဇွန်းတို့၊ ယောက်မတို့လည်း ရောင်းပါတယ်။ Coconut Candy တော့ မ၀ယ်တော့ပါဘူး။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှလည်း စားမှာ မဟုတ်တာနဲ့။ နောက်တစ်ခါ တစ်ခြား ကျွန်းကို သွားကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေသထွက် အသီးတွေနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်။ ဗီယက်နမ် မိသားတစ်စုက သီချင်းတွေ ဘာတွေ ဆိုပြီး ဧည့်ခံပါသေးတယ်။ Tip တော့ နည်းနည်း ပေးရတာပေါ့။ Singaporean တွေက သူတို့ကို သူတို့ ပြောနေကြတယ်။ ``Singaporean တွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ သူတို့တွေ (သီချင်နဲ့ ဖျော်ဖြေတဲ့သူတွေ) တွက်ခြေကိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး´´တဲ့။ Tip ပေးဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ စည်းလုံ ညီညွတ်စွာပဲ အနည်းဆုံး ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်ကြတယ်လေ။ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းကို သွားတာ အပျော်ဆုံးကတော့ လမုတောတွေထဲမှာ လှေစီးရတာပါပဲ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတော့ ချောင်းလက်တက်လေးတွေ၊ မြစ်လက်တက်လေးတွေ၊ ဒီရေတော၊ လမုတောတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ မြောင်းလက်တက်လေးတွေကနေ လှေစီးပြီး မြစ်မကြီးထဲကို သွားရတာပါ။ ဘေးမှာ အုန်းတောတွေ၊ လမုတောတွေနဲ့ ကြားထဲ ကျဉ်းကျဉ်းလေမှာ လှေစီးရတာ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ မိကျောင်းတွေ ဘာတွေတော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ မြစ်မထဲရောက်သွားတော့ လှေက တော်တော်လူးပါတယ်။ မြစ်ထဲမှာ ခဏလောက်နေတော့ သင်္ဘောပေါ် ပြန်တက်ရပါတယ်။ ကိုယ်နိုင်ငံမှာ ရှိပေမယ် မစီးခဲ့ရဖူးပါဘူး။ ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးကိုတော့ `နှလုံးလှ လူမိုက်´ မြန်မာ ကားထဲမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
နေ့လည်စာကို အဲဒီမြို့မှာပဲ စားပြီးတော့ ပြန်လာကြပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ ခဏအိပ်လိုက်၊ နိုးလိုက် ပါပဲ။ ဗီယက်နမ်က လမ်းတွေက ကျယ်ပါတယ်။ အလယ်မှာ ကားသွားဖို့ (Lane) ၂ လမ်း၊ ၃ လမ်း ရှိပြီး ဘေးမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ အတွက်လမ်း ရှိပါတယ်။ လမ်းတွေကလည်း ညက်ပါတယ်။ မြို့တွင်းလမ်းတွေကလည်း ကောင်းပါတယ်။ Express က လည်းကောင်းပါတယ်။ Express ကတော့ Express နဲ့ သိပ်အတူကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး။ နည်းနည်းကျဉ်ပြီး ကားတွေ၊ လူတွေ မပြတ်ပါဘူး။ မလေးရှားက Express တွေက ပိုကောင်းပါတယ်။ US က Express တွေကတော့ ပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီယက်နမ်က (မြန်မာပြည်နဲ့စာရင်) တော်တော် တိုးတက်နေပါပြီ။ Oliver Stone ရဲ့ Heaven and Earth ထဲက ဗီယက်နမ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီ ရုပ်ရှင်ထဲက ဗီယက်နမ်သူတွေလို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ စစ်ကြောင့် လူ ၃ သန်းလောက်သေသွားတာ ဗီယက်နမ်မှာ ယောက်ျားနဲ မိန်းမ အချိုး မမျှခဲ့ပါဘူး။ စစ်ပြီးတော့ ဗီယက်နမ်မှာ ယောက်ျား ရှားသွားပါတယ်။ အဲတော့ ဗီယက်နမ်သူတွေက အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခက်သွားသလို အိမ်ထောင်ကိုလည်း အပြိုအကွဲ မခံနိုင်တော့ ယောက်ျားကို ပြုစုပါတယ်။ လုပ်ကျွေးပါတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုတဲ့ သူတွေကလည်း ကိုယ့်ဘာသာ ရုန်းကန်ရတော့ ဗီယက်နမ်သူတွေဟာ တော်တော် Active ဖြစ်ပါတယ်။ Dependent ရုပ် မပေါက်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် အဲဒီ မညီမျှတဲ့(လူဦးရေ)အချိူးဟာ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် မှာပါ။ အသက် ၁၅ ကနေ ၆၄ ကတော့ အချိုးမျှပေမယ့် ဗီယက်နမ်သူတွေရဲ့ စိတ်ကတော့ မပြောင်းသွားပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့် ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ လူဦးရေ အချိုးပြောင်းသွားပေမယ့် ဗီယက်နမ်က ယောက်ျားတွေရဲ့ အချိုး (စိတ်ဓါတ်) ကတော့ မပြောင်းသွားပါဘူး။ ယောက်ျားရှားတယ် ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံလို့ပဲ ဆိုနေပါသေးတယ်။ ဗီယက်နမ်သူတွေကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ လက်ထပ်ကြပါတယ်။ ၁ နှစ်ကို အယောက် ၂ သောင်းလောက်က လက်ထပ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ များသောအားဖြင့် ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်တို့ကတဲ့။ စင်္ကာပူကလည်း ပါတယ်တဲ့။ မြန်မာ ၁ ယောက် ၂ ယောက်တောင် လက်ထပ်ထားတယ် ကြားဖူးတယ်။
ညနေကျတော့ ယွန်းထည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို သွားပါတယ်။ အလုပ်ရုံနဲ့ ဆိုင်နဲ့ တွဲထားတာပါ။ ယွန်းထည် ဘယ်လိုလုပ်လဲကိုပါ ရှင်းပြပါတယ်။ သူ့ယွန်းက အပြင်ပန်းကတော့ မြန်မာယွန်းထက် ညက်ပါတယ်။ ပိုချောတယ်၊ ပိုပြောင်လက်ပါတယ်။ အထဲကတော့ မြန်မာယွန်းကို ပိုကြိုက်တယ်။ မြန်မာယွန်းကတော့ ၀ါးဖျား၊ ၀ါးမျှင်လေးတွေကို ပုံဖော်ယက်ထားတာ။ သူတို့က သစ်သားကြီးနဲ့။ အဲဒီတော့ မြန်မာယွန်းထည်က ပိုလက်ရာဝင်ပြီး၊ သုံးရတာလည်း ပေါ့ပါးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ပုဂံက ယွန်းခွက်နဲ့ ရေသောက်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ မွှေးလို့။ သူတို့ ယွန်းကတော့ အပြင်ကနေ ကမာခွံတွေကပ်၊ ကြက်ဥခွံတွေ ကပ်ပြီး ပုံဖော်တာလည်း ရှိပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ယူရမှာပါ။ လက်မှုထည်ပါ။ အနုပညာထည်တော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ Mass Production ဆိုတော့။ ယွန်းဗန်းတစ်ခု ၀ယ်လာတယ်။ ဒါက မြန်မာယွန်း၊ ဒါက ဗီယက်နမ်ယွန်း ယှဉ်လို့ ရအောင်လို့။ ပြီးတော့ Saigon Square သွားကြတယ်။ Saigon Square က လဟာပြင်ဈေးလိုမျိုးပေါ့။ နှစ်ထပ်။ အထဲမှာ ဆိုင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေ။ တစ်ခြမ်းကို Mall ဆောက်နေတော့ တော်တော်ကျဉ်းသွားတယ်တဲ့။ မြန်မာပြည်က ရွှေ့သွားတဲ့ အထည်ချုပ်စက်တွေက လုပ်တဲ့ Tee Shirt၊ Sport Shirt တစ်ထည် နှစ်ထည်ကို ရင်နာနာနဲ့ပဲ (တစ်ဘက်ကလည်း ဈေးပေါလို့ ပျော်ပျော်နဲ့ပဲ) ၀ယ်လာတယ်။
နောက်တနေ့ကျတော့ ကိုယ့် အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် လည်ရတာပါ။ အဲတော့ War Museum ကို သွားပါတယ်။ ပြတိုက်က အခုမှ တိုးချဲ့နေတာပါ။ အပြင်မှာ လေယာဉ်တွေ၊ တင့်ကားတွေ၊ အမြောက်တွေ ပြထားပါတယ်။ အထဲမှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ပြထားပါတယ်။ စစ်ရဲ့ အနိဌာရုံတွေကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ Pulitzer ဆုရ ဓါတ်ပုံကိုတော့ အခုမှပဲ ကြီးကြီး မြင်ဖူးပါတော့တယ်။ တချို့ပုံတွေကတော့ ကြက်သီးထစရာ ကောင်းလောက်အောင် ဆိုးရွားပါတယ်။ စစ်ထဲမှာပဲ ဒီလောက်တော့ သေကြေပျက်စီးမှာပေါ့လို့ ကိုယ်ချင်းမစာ မတွေးမိအောင် ချုပ်တီးလိုက်ရသေးတယ်။ လည်သင့်တဲ့နေရာပေမယ့် Presentation ညံ့ပါတယ်။ တစ်ဘက်သက်ဆန်တယ်လို့လည်း ခံစားရပါတယ်။ ရဲရဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ် အသေအချာ မသိတဲ့ဟာကို။ ပြီးတော့ မြို့လယ်ကောင်ကို သွားပါတယ်။ မြို့လယ်က Mall တွေကတော့ အပျံစားပါပဲ။ Europe Style ပါ။ အဆင့်အတန်းမီပါတယ်။ ကိုယ်လည်း မတတ်နိုင်တဲ့ Brand တွေဆိုတော့ ၀င်မကြည့်တော့ပါဘူး။ French ကိုလိုနီ လက်ကျန် Opera House ကိုလည်း ရောက်ပါတယ်။ Sydney က Opera House လို့ Iconic မဟုတ်ပေမယ့် သူက အသက် ၂ ဆ လောက်ကြီးပါတယ်။ သူက ၁၈၉၇ က ဆောက်တာပါ။ ရာစုနှစ် တစ်ခုတောင်ကျော်သွားပါပြီ။ Sydney က ဟာက Modern Architecture ပါ။ ၁၉၅၉ က ဆောက်တာပါ။ အဲဒီနောက် Notre Dame Cathedral ကို သွားပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ မြို့လယ်ကောင် တည့်တည့်မှာပါ။ ဒါလည်း ပြင်သစ် လက်ကျန်ပါပဲ။ ၁၈၇၀ က ဆောက်တာဆိုတော့ တော်တော်ကြာပေမယ့် သူ့မူရင်း Paris က Notre Dame ကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကြာသွားပါပြီ။ Paris ကဟာက နှစ်ပေါင်း ၈၅၀ ကျော်ကြာသွားပါပြီ။ အလောင်းစည်သူမင်း လက်ထက်လောက်က စဆောက်တာဆိုတော့ တစ်ချို့ ပုဂံ ဘုရားတွေထက်တောင် အသက်ကြီးဦးမယ်။ ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ ခါးကုန်းကြီးတို့၊ Walt Disney က The Hunchback of Notre Dame တို့ကြည့်ဖူးထားတဲ့အတွက် Notre Dame ဆိုတာ အစိမ်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Paris က ဟာကိုတော့ အထဲထိ ရောက်ဖူးပေမယ့် ဒီဟာမှာတော့ အချိန်မရှိလို့ မ၀င်လိုက်ရပါဘူး။ ပြီးတော့ မြို့ထဲနည်းနည်းပတ်ပြီး ဆိုင်ဂုံမှာကောင်းတဲ့ ကော်ပြန့်ကြော်နဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီး ပြန်လာပါတယ်။ ဒီနေ့က နေ့တ၀က်ပဲ အချိန်ရတာဆိုတော့ ပြီးတာနဲ့ ဟိုတယ်ပြန် ရေမိုးချိုးပြီး Check Out လုပ်ပြီး လေဆိပ်သွားဖို့ စောင့်နေပါတော့တယ်။ သဘောကောင်းတဲ့ မိုးက ဆိုင်ဂုံမှာ ၄ ရက်လုံး မရွာဘဲနဲ့ လေဆိပ်ထဲ ၀င်ပြီးမှာ ရွာချလို့ တော်သေးတယ်။
ပြန်လာထဲက သူမနဲ့ မိသားစုကို ဒီခရီးအကြောင်း ဖောက်သည်မချရသေးတော့ သူတို့က အရမ်းသိချင်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ကလည်း Blog မှာ ရေးမှ အသေအချာဖတ်ပါဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမာခံ ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ သူမက မပြီးသေးဘူးလား ဆရာကြီးရဲ့ဆိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန်ရိုက်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ လူကလည်း ဒီရက်ပိုင်း ဘယ်လိုမှ မအားတော့ နည်းနည်း အစပျိုးပြီး အဆုံးမသတ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ အခုလည်း စာမစစ်၊ မတည်းဖြတ်ဘဲ တင်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဓါတ်ပုံလည်း နည်းနည်း ရိုက်လာတယ်။
| FLAGS: Me , Travel
Anonymous - 6/7/07, 4:21 PM
ပီအိုင်အက်စ်အိုင် - 6/7/07, 6:16 PM
လူကိုယ်တိုင် ဆိုင်ဂုံကို သွားလည်နေရသလိုပဲဗျို့...
imaginary clouds no2 - 6/7/07, 10:52 PM
လှေပေါ်မှာ ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ပုံ က ဂေါ်တယ်။ သေနတ် ပစ်ရင်း အဲဒီ ဦးထုပ်နဲ့ဓါတ်ပုံ ရိုက်မယ်ဆို ပို ဂေါ်ဂေါ်ဖြစ်သွား နိုင်တယ်လို့ ထင်တယ် (ဘိုးတော် စတာနော်၊ တစ်ယောက်က လဲ ကမ်းတက်တဲ့ အတွေ့ အကြူံတွေရေးတော့)
Andy Myint - 6/7/07, 10:56 PM
ဟားဟား...ဟုတ်တယ်။ သေနတ်ပဲ လိုတော့တယ်လို့ အိမ်က လူတွေကလည်း ပြောတယ်။
Phyo Wai Kyaw - 6/8/07, 5:24 PM
Your writing style is journalist's style. Can stick the reader's mind to read to the end. [ Something like.. we read and think what will happen?.. what will happen?...] Thanks for sharing! ;-)
Andy Myint - 6/8/07, 5:37 PM
ဒီလိုပြောလို့ တော်သေးတာပေါ့။ ကျေးဇူးပါပဲ။ ရှည်များ ရှည်သွားပြီလားလို့။ ဒါတောင် တစ်ချို့ဟာတွေ (ဥပမာ ဗီယက်နမ် စစ်အကြောင်းတို့၊ ပြင်သစ် ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတို့) ဖြတ်ချန်ထားရတယ်။
ကျော်မင်းနိုင် - 6/8/07, 7:15 PM
plsaw,s'pore - 6/10/07, 3:34 PM
Andy ရေ ၊ ဆိုင်ဂုံကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သလို ခံစားရတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ပြာပုံဘဝ က တက်လာတာ ကိုယ်တွေ အသက်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ စလုံးကို ပုခုံးချင်းတိုက်လို့ ရ တဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေပြီ။ ( စပြီး တံခါးဖွင့်တာ ၉၅၊ ၉၆ က လို့ထင်တယ်) ကိုယ်တော့ ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်အကြောင်းတွေးရင်း ရင်တွေနာတယ်ဗျာ။ ( ဒီနေရာ မှာ အကြောင်းသင့်လို့ပြောချင်တယ်၊ ကိုယ်တော့ မြန်မာပြည် ကို “ရွာ” လို့ ဘယ်တော့ မှ မသုံးဘူး)
TZA - 6/20/07, 2:32 AM
Andy Myint - 6/20/07, 11:38 AM
စာဖတ်သူတွေအတွက် စေတနာထား ရေးပါတယ်။ အခုလို မွှေနှောက် ရှာကြံဖတ်တဲ့အတွက်ရယ်၊ Comment အတွက်ရယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကိုအောင်။ အဟဲ.. ဘိုဆန်နေကြပုံများ။ (ဘိုတွေက အခုမှ စတွေ့ခါစဆို Surname အရင်ခေါ်ကြတယ်လေ။) မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့။ ကိုသန့်စင်အောင် Blog က ကျွန်တော့်ရဲ့ Favourite တစ်ခုပါ။
Anonymous - 4/16/10, 11:56 AM
These guys(vieatnames) used to ask the money on the street infront of our eyes.Now They pass us.Why?
Zaw Win - 11/5/13, 9:24 AM
Aye Myamya - 2/10/15, 4:54 PM
ကျေးဇူးပဲ အောင်အောင် နင့်ဘလော့ခ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်လာတာပဲ။အများကြီးရေးထားတာပဲနော်။